Sidaan u wajaheyno arimaheena gaarka ah - Tenants Victoria
Sidaan u wajaheyno arimaheena gaarka ah
Adeega Sharciga Ururka Kireystayaasha way ka go’an tahay masuuliyada iyo si caddaalad ah u maamulida macluumaadkaaga shakhsiyadeed, ee waafaqsan Xeerarka Macluumaadka Arimaha gaarka ee ku dhigan Xeerka Macluumaadka Arimaha gaarka ah 2000 (Vic).
Qoraalkan arimaha gaarka ah wuxuu sharxayaa wixii macluumaad ah ee ku saabsan adiga ee laga yaabo inaan ururino iyo sidaan u isticmaalno una bixino, sidaad noo tilmaami karto haddii aad doorbideyso inaan xaddido isticmaalka iyo bixinta macluumaadkaas iyo nidaamka meel noo yaal ee aan ku ilaalinayno arimahaaga gaarka ah. Waajibaadka qarsoonaanta macaamiilkeena laguma sheegin Qorshaha Arimaha gaarka ah laakiinse waxaa lagu sharxay Shuruudaheena Caawimaadeed.
Micnaha ‘macluumaadka shakhsiyeed’
Macluumaadka shakhsiyeed micnahiisu waa macluumaad ama fekrad ku saabsan shakhsi lagaran karo. Nooca macluumaadka shakhsiyeed ee aan ururino waxaa ka mid ah magaca, cinwaanka, taleefanka iyo iimeylka, faahfaahinta xiriirka, faahfaahinta cabashada iyo macluumaadka khuseeya hawsha aan kuu qabaneyno adiga.
Ka raali ahaanshahaaga
Nasiinta macluumaad adiga kugu saabsan adoo adeegsanaya website kana ma sidii kale, waxaan raali ka tahay ka raali ahaanshaha ururinta, isticmaalka, bixinta iyo gudbinta macluumaadkaas sida ku qoran Qorshaha Arimaha gaarka ah.
Haddii aan bedelno Qorshaha Arimaha gaarka ah waxaan gelinaynaa isbedelada website kan, waxaana laga yaabaa inaan gelino ogeysiisyo boggaga kale ee website kan, si aad uga warqabtid macluumaadka aan ururino iyo sidaan had iyo jeer u isticmaalno. Isbedelada waxay dhaqangelayaan isla markiiba la geliyo website ka.
Macluumaadka aan ururino ee adiga kugu saabsan iyo sidaan u isticmaalno una bixino
Waxaa laga yaabaa inaan macluumaad kugu saabsan ururino oo xaalado kala duwan ah, oo ay ka mid tahay markaad soo doonato caawimaad sharci iyo tallo aad naga hesho; markaad su’aalo na soo weydiiso meel kasta oo website ka mid ah; markaad ka soo qaybgasho kulan waxbarid kooban ama munaasabad kale oo aan qabano; markaad saxiixdo si aad macluumaad nooga hesho, oo ay ku jirto markaad shaqo naga soo dalbato ama shaqo naga aqbasho ama markaad aad soo qadinto inaad bixiso ama aad adeegyo na siiso.
Ma isticmaali doono habab sharci darro ah, aan si aan macquul ahayn faragelin u leh ama xoog in lagaaga ururiyo macluumaad adiga kugu saabsan.
Macluumaadka aan ururino waxaa laga yaabaa inuu ka mid yahay magacaaga, cinwaankaaga boosta, cinwaanka iimeylka, lambarka taleefanka iyo macluumaad la xiriira shaqadaada, dakhligaaga iyo/ama macluumaad kale oo la xiriira waxaad doorbideyso ama meeshii uu khuseeyo adeegyada sharciga ah ee aan bixino. Wakhtiba wakhtiguu ka danbeeyo, waxaa laga yaabaa inuu ka mid yahay macluumaad ku saabsan macluumaadka caafimaadkaaga iyo faahfaahinta wixii diiwaan dembiyeed ee aad leedahay.
Haddii aadan bixin macluumaadka aan kaa codsano wakhti, wakhti, waxaa laga yaabaa inaan adeeg kuu qaban ama haddii kale aanan fulin ujeedada aan macluumaadka u codsanay.
Waxaa sidoo kale laga yaabaa inaan ururino, isticmaalno oo aan ku bixino macluumaadka shakhsiyadeed ama macluumaadka meeshii macquul ah ee lagama maarmaan ay tahay in la sameeyo, jimicsi ama difaacida dacwad sharci ama mid cadaalad ah, ama ujeedooyinka nidaamka xalka isafgaran waaga bedelka qarsoon ah.
Waxaa nalooga baahan yahay inaan si joogta usoo warbixino dawlada Dhexe iyo ta gobolka Victoria ee macluumaadka tirakoobka aan la aqoonsaneynin ee la xiriira macaamiisha iyo adeegyadeena. Haddii aad naga soo doonato tallo sharci oo sii soconeysa iyo caawimaad anaga, waxaan ku weydiineynaa inaad tan noosameyso adoo na siinaya macluumaadka soo socda:
Haddii laguu garto dadka dalka
Haddii iin la dhibtooneyso
Dakhligaaga intuu le’eg yahay iyo meeshaad ka hesho
Haddii aad u baahan tahay tujumaan
Haddii ay qaataan lacagta Centrelink ama lacagaha taageerada dakhliga.
Caawimaada sharciga ee socota oo aad naga hesho waxay hoos imanaysaa heshiiskayaga lagugu siinayaa caawimaadeena. Waxaan sidoo kale u ururinaa macluumaad shakhsiyeed:
Qiimee xaq u yeelashadaada caawimaada shakhsiyadeed ee aad naga hesho
Caawi shaqaalaheena si ay kuu siiyaan caawimaad sharci
Hubi raacitaankeena sharciga iyo anshaxa aqooneed ee sharciga.
Waxaa sidoo kale laga yaabaa inaan isticmaalno macluumaad laysku daray iyo tira koobka ee ujeedooyinka isgaarsiinta iyo war murtiyeedka ee qaybta istiraatijiyada isbedelka bulshada Ururka Kireystayaasha Victoria.
Xaaladaha qaarkood, waxaan ururinaa macluumaad shakhsiyeed adiga kugu saabsan il saddexaad. Tusaale, waxaa laga yaabaa inaan ka ururino macluumaad shakhsiyadeed ururo kale oo aad la macaamilto, wakaalada dawladda, iyo macluumaad ama adeeg bixiyayaasha ama diiwaanka dadweynuhu heli karaan.
Anagu, shaqaalaheenu, wakiiladeena, la taliyaasheena iyo qandaraaslayaasha labaad, waxaa laga yaabaa inay isticmaalaan macluumaadkaaga wixii ku saabsan ee aan kaa ururinay si aan tallo sharci kuu siino caawimaad iyo macluumaad, si aan kuugu soo dirno macluumaad akhbaareed, daabacaad, siminaar iyo munaasabaddo; si aan u hagaajino adeegyadeena iyo isgaarsiinteena; si aan wax uga qabano codsigaaga aad na codsatay, iyo codsigaad noo soo dirtay, iyo wixii ujeedo ah ee kale ee macluumaad nalagu siiyey ama wixii ujeedo ah ee kale ee la xiriira ama kabaya wax ka mid ah kuwaas kore. Waxaa sidoo laga yaabaa inaan u isticmaalno macluumaadka shakhsiga ah ama macluumaadka meeshii uu sharcigu noo ogol yahay inaan sameyno. Tan waxaa ka mid ah xaaladaha meeshaad raali uga noqotay isticmaalkan oo ahaa mid ah ama mid ishaaray.
Waxaa laga yaabaa inaan xaaladahan soo socda ku bixino macluumaadkaaga:
Haddii aad tahay macmiilka Adeega Sharciga ee Ururka Kireystayaasha, waxaa laga yaabaa inaan siino macluumaadkaaga shakhsiyadeed:
Sharci yaqaanada, takhasuslayaasha sharciga ee kale (oo ay ku jiraan dhexdhexaadiyaashu), la taliyayaasha ama khabiirada arintaada ku hawlan ama
Adeegyada kale sharciga bulshada ama bixiyayaasha adeegga samafalka iyo bulshada ee ujeedadiisu tahay helida tallo sharci oo dheeraad ah ama noocyada kale ee caawimaada ah.
Haddii aan ururinay macluumaadkaaga shakhsiyeed markaan siineyno adeegyada sharciga macaamiisheena wixii ka mid ah iyo meeshii uu ogol yahay sharcigu kuwa kale ujeedadoo ah in adeegyadaas loo qabto;
Waxaa laga yaabaa inaan siino macluumaadkaaga shakhsiyeed shaqaalaheena, wakiiladeena, lataliyaasheena iyo qandaraaslayaasha labaad ee naga caawiya maamulida ururkeena oo uu ku jiro website kaan ama bixiya adeegyo la xiriira oo ku xiran waajibaadkeena qarsoonaan ahaan iyo ammaan ba.
Waxaan sameynaynaa wixii bixin ah ee macluumaadkaaga shakhsiyadeed ee sharcigu u baahan yahay ama noo idmaya inaan sameyno.
Macluumaadka ku saabsan dadka kale ee aad na siiso
Haddii aad na siiso macluumaad shakhsiyeed ku saabsan qof (sida qaraabo ama saaxiib oo aad caawimo u raadineyso adoo metelaya) waa inaad hubisaa inaad xaq u leedahay inaad na siiso macluumaadkaas iyo in anagoon qaadin tallaabooyin dheeraad ah, laga yaabo inaan ururino macluumaad, isticmaalno oo aan u bixino macluumaadkaas sida lagu sharxay Qorshahan. Gaar ahaan, waa inaad hubiso in qofka ay khuseyso inuu ka warqabo arimaha kala duwan ee ku faahfaahsan Qorshaha Arimaha gaarka ah, maadaama arimahaasi ay khuseeyaan shakhsigaas, oo ay la socoto aqoonsigeena, sidii naloola soo xiriiri lahaa, ujeedada aan u ururineyno, sidaan macluumaadka u bixino (oo ay ku jirto siinta cid dibedaha joogta), xuquuqda qofka shakhsiga ah ee uu ku heli karo macluumaadka oo uu uga cabban karo sida loo maareeyo macluumaadka, iyo wax aka dhalan kara haddii aan macluumaadka la bixin (sida awooddaradayada inaannan bixin Karin adeeg).
U heynta macluumaadka adiga kugu saabsan si ammaan ah
Waxaan qaadi doonaa tallaabooyinka ururka iyo farsamada ku haboon si loogu hayo macluumaadka si qarsoon oo si ku filan looga ilaaliyo lumitaanka, si xun u isticmaalida, iyo ciddaan u idmaneyn inay hesho. Waxaa laga yaabaa in macluumaadka lagu hayo nidaamyadeena tignoolajiyada macluumaadka ama faylal warqado ah.
Macluumaadkaaga ma heyn doonoo wax ka badan intii lagama maarmaan ah.
Cusbooneysiinta macluumaadka adiga kugu saabsan
Haddii macluumaadka aad na siisey wax ka mid ahi isbedelo, tusaale, haddii aad bedesho cinwaanka iimeylkaaga ama haddii aad dooneyso inaad joojiso wixii codsi ah ee aad naga sameysay, fadlan noo soo sheeg adoo iimeyl noogu soo diraya admin@tuv.org.au
Waxaad xaq u leedahay inaad codsato nuqulka macluumaadka shakhsiyeed ee kugu saabsan ee aanu heyno, si aad u saxdo wixii macluumaad shakhsiyeed ee aan sax ahayn iyo diidida inaan u isticmaalno macluumaadkaaga shakhsiyeed ujeedo suuqeyn. Waxaa sidoo kale laga yaabaa inaad sameyso cabbasho haddii aad saluugsan tahay wax ku saabsan maareynta macluumaadkaaga shakhsiyeed.
Haddii aad dooneysid inaad sameyso wax ka mid ah waxyaalahaas sare fadlan iimeyl u soo dir admin@tuv.org.au
Waxaad sidoo kale wici kartaa 03 9411 1444 oo aad weydiisan kartaa Maareeyaha Adeegga Sharciga.
Waxaan tixgelineynaa wixii cabasho ah ee aanu helno waxaana jawaab kugu siineynaa si wakhtiyeysan (badanaa 30 maalmood gudahood markaan helno). Haddii aadan ku qanacsaneyn jawaabteena, waxaad cabashadaada geyn kartaa sharciyeeyaha arimaha gaarka ah ee khuseeya. Waxaan ku siin doonaa faahfaahinta sharciyeeyaha khuseeya markaad codsato.
Sidii aad noola soo xiriiri lahayd
Waxaan soo dhoweynaynaa fekerkaaga ku saabsan Qorshaheena Arimaha gaarka iyo website keena. Haddii aad jeclaan lahayd inaad noola soo xiriirto wixii weydiimo ah ama faallooyin, fadlan iimeyl u soo dir admin@tuv.org.au ama warqad u soo dir Maareeyaha Adeegga Sharcigar, Ururka Kireystayaasha Victoria, P.O Box 234, FITZROY, VIC 3065.
Our approach to privacy | Somali